Borqor Halac iyo Murtidii Wasiir Miyir. By Ahmed M. Adan (Doob-baje) From Toronto | Salaan Media
Halac waxuu ahaa Boqor walwal iyo walaac badan, Qadarka iyo Qaybta Eebaheena aan aaminin. Boqorka, marka siduu rabo mooyee si kale arrin u dhacaba xaraaradiisa ayaa cirka isku taagi jirtay.
Waxa jiray Wasiir boqorku aad u jeclaa oo magaciisu ahaa Wasiir Miyir. Marka boqorka talo aduun ku ciirto, ee uu Boqor Halac la-halco car iyo cadho, ama uu walaac iyo murugo la-gaxo (Gax = Freeze), Wasiir miyir ayaa Boqorka dhinac iman jiray oo ku odhan jiray â€œWaa Qaybuu yidhi Qotonshee: Ilaahay khayr haka dhigoâ€. Erayadaasu boqorka xoog ayay u dejin jireen. Boqorku aad iyo aad ayuu u jeclaa hadalka Wasiirka iyo odhaahda uu caadaystay (……….Ilaahay Khayr haka dhigo …..), waanu ku degi jiray oo ku raaxaysan jiray erayadaas.
Maalin ayaa Boqor Halac oo ugaadhsanayaa fari goâ€™day. Boqorkii oo car iyo xannuun la-halcayaa ayuu Wasiirkii ku yidhi, siddii caadada u ahayd â€œ Waa Qaybuu yidhi Qotonshee: Ilaahay khair haka dhigo”…… Boqorkii intuu booday ayuu yidhi:â€ “Ma anigoo fari iga goâ€™day oo waxan oo xuun ah qaba ayuu yidhi â€œ Ilaahay khair haka dhigo, kanu Wasiir mahee waa cadow. Wasiir-nimada ha laga qaado oo hala xidhoâ€ Wasiir miyir ayaa siddii rikoodh jabay ku jawaabay â€œWaa Qaybuu yidhi Qotonshee, …Tanna Ilaahay Khayr haka dhigoâ€.
Mudo ka dib, boqorka gumadkii fartu waa u bogsaday, naanaysta “boqor farlow”‘ ayaa loo baxiyay. Wixii ugaadhsiga ka gaadhayna wuu ilaaway.
Borqorkii ayaa maalin kale ugaadhsi tagay. Roob ufo badan ayaa asqeeyay Boqorka iyo askartiisii Ilaalada ahayd. Intay dayoobeen ayay jidkii dhinaca kale qaadeen. Siday u ordayeen ayay afka uga soo galeen beel dad qaaqaawan oo u dabaal-degaysa maalinta iidooda ahayd ee Ilaahooda Sanamka ah ay u Ale-baryayeen. Ale-barigaas oo ah in la sadqeeyo nin helib badan oo caafimaad qaba.
Qayladii iyo sawaxankii ayaa isu yeedhay oo buurihii isu celceliyeen ” Waa dad qaalad….Waa dad qaalad….waa dad-qal-aad aad ah, waa qaar badan ee qalabkiina diyaarsadayyyyyâ€¦â€¦â€¦ diyaaarsadayyy. …!
Ilaaladii iyo beeshii ayaa daggaal fooda is-daray. Waxa dhintay dhamaan Ilaaladii iyo in badan oo ka mid ah beeshii Qaaqaawan. Boqor Halac ayaa la qabtay isagoon wax dhaawacii gaadhin. Dar wayn (miis wayne) oo shillal fiican lagu goglay ayaa la kor saray; xeedhooyinkiibaa la soo dhaweeyay; midiyihiiba loo listay, wadaadadii ayaa ku duceeyay. Dhakhtaradii beesha ayaa xub-xubin jidhkiisa u baadhay si loo hubsado in ninka Sanamka loo sadqaynayaa aanu wax iin ah iyo nabar midna lahayn.
Markii middidii luqunta laga saari-lahaa ayuu wadaad arkay fartii go’nayd. Markaasuu ku baaqay inuu ninku far-la’ yahay oo aanu Sanamku ka raali noqondoonin.
Wadaadkii waxuu ku taliyay, inaan Halac loo ogolaan inay dadku qashaan, maa daama, markii hore Sadqada Sanamka loola niyooday, Sanamkuna diiday qaliinka ninkaas oo uu Sanamku dadkoon arkayn far ka jaray, degdegna u bogsiiyay. Boqor Halac waxa lagu daray ciidan nabadgalyo ku gaadhsiiya dadkiisii iyo dalkiisii.
Boqor Halac markuu gaadhay Qasarkiisii waxuu degdeg u soo furay Wasiir Miyir.Waxuu u ceshay jagadii Wasiirnimadiisii. Waxuu ku yidhi: ” Siddaad tidhi, Ilaahay Khar ayuu iiga dhigay fartii iga go’day, oo haddii aanay fartu iga goâ€™in, shalay ayaa lay qalan-lahaa. Waxaanse ku waydiiyay adigu wasiirnimadii aan kaa qaaday iyo xidhistaan ku xidhay maxaad u tidhi “Ilaahay khair haka dhigo”. Wasiir miyir waxuu ugu jaawaabay “Anigu waan dhammahay oo fari igama go’na. Hadaanad i xidhin waan ku raaci lahaa oo anigaa lay qalan-lahaa”
Ilaahay dhammaanteen Qaybtiisa iyo Qadarkiisa ha ina ogolaysiiyo, madaxda xisbiyadana miyir iyo missan ha ugu daro.
Ahmed M. Adan (Doob-baje)
E-mail: Qotonshe@yahoo. com